Ambohijatovo | GAZETY_ADALADALA
#MALOK’ILA (13) PATSA IRAY TSY OMBY VAVA
Posted on 01/08/2012 by gazetyavylavitra
Sarimihetsika malaza ary saika ezahana vokarina aminà andiany samihafa ny MALOK’ILA. Tsy misy maharatsy an’izay, ary ny hanandratra ny an’ny tena aza no mila ilofosana sy tsara atosika mba ho reharehantsika rehetra.
Indro kely anefa, asa fa indraindray tokoa toa sarotra ny mihazona laza na toerana iray mandritra ny fotoana maharitra. Atahorana ho izay no hitranga raha ity zavatra hita tetsy Ambohijatovo ity no hitohy. Efa fanindroany io fa tsy vao izao. Tsy tadidy na efa navoaka teto ihany ny teo aloha, na ity fanindroany no voalohany hotantaraina.
Tsotra ny anton’ity lahatsoratra ity. Raha fahafinaretana sy tsikitsiky eo anivon’ny fianakaviana sasany no entin’ny sarimihetsika MALOKILA hatramin’ny nivoahany, dia mba araho daholo ny sary havoaka manaraka eto, satria mety ho ny tsikin’ny sasany, no ho tena MALOK’ILA ara-bakiteny ho an’ny sasany kosa raha sanatria mitranga ny PATSA IRAY TSY OMBY VAVA. Nahoana angaha hoy ianareo?
Eo aminà kihon-dàlana faran’izay tena mampidi-doza no nametrahana ny tranokely fampahafantarana sy famarotana ny vokatra MALOK’ILA an’ny #Scoop Digital. Ny zavatra mahagaga dia misy polisy mpandamina fifamoivoizana eo akaiky eo, fa tsy miraharaha ny eo amin’io faritra io mihitsy. Aleony mijoro ery akaikin’ny tsangambato (an’ny Baiboly angamba izy io) ary dia, na miresaka amin’ny mpamily Taxibe, na mitazana ny any Analakely. Ny tena naka ny sary indray aza no nanaovany tsiky mandreraka. Tamin’ny famarotana ilay andiany teo aloha, teo amin’ity faritra ity ihany, dia nezahana natao ny naka ny hevitr’ilay mpandrindra fifamoivoizana teo tamin’izany fotoana. Ny valinteniny dia hoe:
Aleo eo fa eo no fantany fa mety
ARAKA NY KARAMA RAISINA VE?
Raha izany, tsy fandaniana ny hetra aloanay sy ny volam-bahoaka amin’ny ankapobeny ve ny fanomezana karama an-tapitrisa an-dry zalahy ireny? Tsy ny eo ihany an, fa rehefa mpitandro fiaminana mandrindra fifamoivoizana amin’ny ankapobeny mihitsy. Tsy ahitàna faritra, na iray aza, eto amin’ny renivohitr’i Madagasikara, ka hoe milamina sy mirindra ny fifamoivoizana amin’ny toerana be mpivezivezy. Mibaby tànana no ataony. Marina fa mba mampihena ny tsy fifanajan’ny mpamily ny fisian-dry zalahy rehefa eo izy, fa hita ho tsy sahaza ny karamany kosa ny vokatra sy ny fihetsika hita eny amperin’asa eny
TSY IZAHO ILAY BANDY
Hiverenana ny horonantsary MALOK’ILA. Asa raha sampana ara-barotra hafa mihitsy no miadidy ity tranolay kely etsy Ambohijatovo ity, na ny mpamokatra no tompon-kevitra tamin’ny fametrahana azy io teo. Fa raha ny fijery azy amin’ny saina tsy miangatra dia fanaovana tsinontsinona ny mpamily sy ny mpandefa an-tongotra ilay izy. Toy ny miteny hoe:
Aleo ho avy izay ho avy, rehefa tsy izahay no voa dia tsy olana.
Izany hoe vain-drahalahy tsy mba maharary raha sanatria misy loza mitranga eo noho ny tsy fifankahitan’ireo avy any Ambohijatovo ambony sy ny avy any Ambondrona, rehefa hifanapa-dàlana.
Lava loatra ny resaka fa ndeha ny sary no hampitenenina
ny trano hazo fivarotam-noky hatry ny ela iretsy ambadik’ilay tranolay manaMALOK’ILA ny làlan’ny daholobe
nalaina avy aty aloha ity fiara ity dia alaintsika avy any aoriana indray avy eo
toy izao ilay 4X4 rehefa alaina avy aty aoriana. Ilay R12 koa jereo tsara fa sahirana vao hahita na misy na tsia ny midina avy any ambony, ny avy any ambony ho sahirana mahita ny avy aty amin’ny haviany
Aiza ve ka ao anaty tournant X tsy ifampitazanana no asiana an’izao, Tena MALOKA TANTERAKA ity fa tsy MALOK’ILA intsony
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, haino amanjery, sarimihetsika, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: #MALOK'ILA, #ScoopDigital, Ambohijatovo, Ambondrona |	Leave a comment »
Savorovoro androany 18 oktobra 2010
Posted on 18/10/2010 by gazetyavylavitra
Nialoha, nandritra ary taorian’ny fotoam-pitsarana natao teny Anosy androany dia niazo an’Ambohijatovo sy Analakely ary Behoririka ireo andian’olona notarihan’i Fetison Andrianirina, izay tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana azy androany. 48 izy ireo no tokony hiatrika fitsarana tamin’ity anio ity. Ho avy indray koa i Chissano ato ho ato. Fifanandrifian-javatra ve? Fiara iray no nitondra niaraka an’i Fetison Andrianirina, Lalatiana Ravololomanana, Zafy Albert tamin’ity androany ity. Saingy noho ny fotoana fohy nomen’ireo mpitandro filaminana hahafahana mampiasa ny kianja Ambohijatovo dia tsy afaka nandray fitenenana Atoa Zafy Albert na dia efa voaomana hanana anjara aza.
Ambohijatovo niaraka tamin'i Fetison Andrianirina
Fa misy inona mahaliana ary ato?
Fetison Andrianirina mikabary
Fialàna ny kianjan'Ambohijatovo sy fandalovana an'Analakely
"Tsy manaiky ho resy" no dika malalak'ilay soratra amin'ny akanjon'ilay ranamana iray io
sady mandeha no manoratra mampita hafatra
Mandalo Gara ho any Behoririka
Fidinana teny Behoririka avy any Soarano
raha 10mn no nomen'ireto mpitandro filaminana ireto hijanonana tao Ambohijatovo, dia niantso ny olony hiverina eo kosa indray i Fetison Andrianirina rahampitso maraina
Nisy ny fihoaram-pefy tamin’ity hetsika androany ity, toy ny fikapokapohana fiaran’olona sy taxibe teny amin’izay nolalovana (tsy ny rehetra aloha no nanao an’izay fa vondron’olona vitsy), teo koa ny afnaovana sakana nanodidina an’i Behoririka sy Ankadifotsy. Ireny rehetra ireny dia nitarika ny mpitandro filaminana handrava ny hetsika tao amin’ny Magro Behoririka tamin’ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso.
Efa nandefasana fiantsoana ihany koa Andriamatoa Fetison Andrianirina sy Ramatoa Lalatiana Ravololomanana mba hanatona hitondra fanazavana momba ireo fihoaram-pefy ireo rahampitso maraina eny amin’ny zandary Betongolo.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: 18 oktobra, Ambohijatovo, Analakely, Fetison, Lalatiana Ravololomanana, savorovoro, zafy albert |	1 Comment »